विवादै – विवादमा फसेको फिल्म ‘रोज’ प्रदिपका लागि बरदान कि अभिसाप ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsविवादै – विवादमा फसेको फिल्म ‘रोज’ प्रदिपका लागि बरदान कि अभिसाप ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट : – नीरक पौडेल निर्देशित फिल्म ‘रोज’ भदौ २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउदैछ । निकै सस्पेन्स कथामा सिनेमा बनाइएको भनेर निर्देशक निरक भनेर थाकेका छैनन् । फिल्म निर्माण सुरु हुँदादेखि नै फिल्म विवादित बन्न पुगेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डसम्म फिल्म बिरुद्ध उजुरबाजुर नपरेको पनि होइन । केही समय पहिले हत्या गरिएकी रोजी महर्जनको बिषयमा फिल्म बनाएको भनेर रोजीका परिवार चलचित्र विकास बोर्डसम्मै पुगेका थिए । उनीहरुको उजुरवाजुर दिने विकास बोर्डमा संयोगले निरककै दिदी निकिता पौडेल नेतृत्वमा थिईन् । उनले आफ्नै भाइ भएपनि निरकको फिल्मलाई केही समय रोकेकी थिईन् । यद्यपि, निर्माण टिमले पहिले ‘रोजी’ नाम राखेको फिल्मको नाम रोज परिवर्तन गर्न पुगे । वास्तवमा निर्माण टिमले रोजीको सेन्टिमेन्ट्स क्यास गरेर फिल्म चलाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्देशक निरक पौडेलले त्यो कुरालाई लुकाउन खोजेर पनि लुकाउन सफल भएनन् । उनले भनेका थिए, ‘वास्तवमा हामीले ‘रोजी’ नाम राखेर फिल्म चलाउन सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्न खोजेको होइन ।’ उनले रोजीका परिवारसँग बसेर फिल्मको नाम परिवर्तन गरेको त स्वीकारे तर, किन स्वीकारेनन् त्यही कथामा फिल्म निर्माण भएको थियो भनेर ?
निर्माण टिमलाई हाम्रो प्रश्न यदि सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्न नखोजेको भए पहिले फिल्मको नाम रोजी र पछि किन एकाएक रोजमा परिवर्तन भयो त ? यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्यो निर्माण टिमले । होइन भने स्वीकार गर्नुपर्यो फिल्म चलाउन सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्न खोजिएकै हो भनेर ।
निर्देशक पौडेलले कार्यक्रममा एउटा अत्यन्तै गैरजिम्मेवार जवाफ समेत दिएका थिए । उनले आफूले रोजी हत्याकाण्डबारे थाहा नपाएको बताए तर, सँगै फेरि डाइलग बनाउदा उनीसँगको बिषय मेल नखाओस भनेर आफूहरु निकै सतर्क भएको प्रतिक्रिया दिए । यो उनको फिल्म चलाउने स्टन्ट हो कि सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्ने रणनीति हो ?
ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिनेता प्रदिप खड्काले निर्माण टिमको व्यवसायको लागि सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत भएका थिए । हुन त एउटा कलाकार भएपछि आफूले गरेको कामबाट निर्माण टिमको व्यापार बढाईदिनु उसको कर्तव्य पनि हो । तर, निर्माण टिमको व्यापार बढाउने नाममा समाजलाई नै हानी नोक्सानी हुने कुरामा जानाजान प्रदिपले समर्थन जनाउनु कति उपयुक्त होला ? अहिलेको समयमा जतातै महिलामाथि हिंसा, बलात्कार तथा अपराधका घटना बढिरहेकाबेला फिल्मको कथावस्तु र दृश्यहरु पनि त्यस्तै किसिमका आउदाखेरि र फिल्म प्रदर्शनमा आएपछि त्यसले आमनागरिकलाई दिने सन्देश के कस्तो होला ? हामी विचार गर्न सक्छौ । यो वास्तवमा सिरियस विषय हुनसक्छ । वास्तवमा प्रदिपको प्रस्तुतिबाटै थाहा हुन्थ्यो उनले फिल्मले दिने सन्देश नकारात्मक हुनसक्ने आशंकासहित बोल्नु परेको थियो ।
फिल्मको कथा मात्रै विवादमा परेको होइन यसको स्कृप्ट समेत विवादको घेरामा परेको छ । फिल्मको स्कृप्ट यसअघि कसैले लेखिसकेकाले आफ्नो भएको दावी समेत गर्दै आएका छन् । उनले दाबी मात्रै होइन मुद्दा समेत हाल्ने चेतावनी दिएको कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ । निर्माण टिमले उक्त कुरा हल्ला मात्रै भएको जिकिर गरिरह्यो । निर्माण टिमले फिल्म निर्माण सुरु भएदेखि नै आफूले गरेका विवादित क्रियाकलापको एकपछि अर्को विवादको सामाना गर्नुपरेको छ । फिल्म प्रदर्शन पश्चात पनि सायद निर्माण टिमले सुख पाउने लक्षण देखिएको छैन । सँधै प्रेमभावमा एउटै शैलीमा देखिने प्रदिपले आफूलाई लागेको मोनोटोनस चरित्र मेटाउने लोभ तथा निर्माण टिमले कसैको सेसिन्टमेन्ट्स क्यास गर्ने दाउमा निर्माण गरेको फिल्मको लगानी खर्लप्पै नडुब्ला भन्न पनि सकिन्न । बाँकी कुरा त भदौ २२ पछि सबैले घाम झै छर्लङ्ग देख्ने नै छन् ।
[brid video=”285716″ player=”13929″ title=”Intu Mintu London Ma Samragyee rl Shah & Dhiraj Magar”]
फिल्म ‘गीत गजल’ बनाउँदै निर्देशक नितिन चन्द
‘नाई नभन्नु ल ५’को सय शो अमेरिकामा !
काठमाडौं माघ, २२– सोमबार काठमाडौंमा एक बिशेष कार्यक्रमकाबीच निकै प्रतिक्षा गरिएको चलचित्र ‘कृ’ को दोस्रो गीत ‘मैले जानी नजानी’ को सार्वजनिक गरिएको छ ।गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा धेरैको चासोमा थिए नायक अनमोल केसी र सँगै नायिका […]
October 25, 2018 sutraentertainment Celebrity, Celebrity Profile, Feature News, Gallery, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – बोबी सिनेमा चल्नु अगाडिसम्म कसैलाई पनि यो सिनेमाले राम्रो कमाई गर्छ भन्ने लागेको थिएन । चलेको १ शोमै हलबाट उत्रन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, सिनेमा चलेपछि मल्टिप्लेक्समा ५ हप्तासम्म दर्शक आइदिए […]
परमिताले आफ्ना प्रेमीलाई आफै प्रपोज गरेको खुलासा : सुरक्षा भन्छिन हामी कलेजमा यसरी केटा जिस्काउथ्यौ ( भिडियो अन्तर्वार्ता )
October 31, 2018 sutraentertainment Interview, Video Interview 0
फिल्म चङ्गा चेट रिलिजको संघारमा कलाकारले प्रमोसनमा टाइम नदिएको भन्दै निर्माता निर्देशक कलाकार सँग चिडाइरहेका छन। प्रियंका कार्की र आयुश्मान देशराज यती बेला प्रमोसनमा देखिएका छैनन। परमिता , सुरक्षा र सन्दिप क्षेत्रिले भने केही समय […]